Amulet amaTsha aMandla aMatsha oButyebi boBuntu kunye neShishini-kwiHlabathi lamaKhubalo
Ikhaya > Imali eNtsha eNamandla kunye ne-amulet yeshishini
Imali eNtsha eNamandla kunye ne-amulet yeshishini
Xabiso rhoqo € 19 Intengo yentengiso € 79 Ixabiso lento /nganye
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo - Ayisebenzi- € 19 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo- yenziwe yasebenza- € 29 ISterling Silver-Ayisebenzi- € 42 ISterling Silver -Yenziwe yasebenza- € 54
Lo mnqantsa onamandla okwenziwa nguMali kunye neShishini lilungele yonke into enxulumene nemali, ishishini, ubutyebi, ubuninzi, ishishini kunye nobutyebi. Uvavanyo lwabathengi bethu bayazithetha
Imimoya yeMali neShishini
Imimoya emi-6 enokukwenza ube sisityebi kunye nemimoya emi-6 enokukunceda wenze ishishini elinempumelelo kakhulu
UKumkani uSolomon wayenobukhosi obukhulu kunye nobuncwane obuninzi. Imbali Isixelela ukuba oku kungenxa yemimoya ye-Ars Goetia wayilawula kwaye wamnceda ukuba afezekise oku.
Wayalela imimoya emi-6 eyaziwayo ukuba izise imali yesanti ebiza imali eninzi kunye nobutyebi kunye nemimoya emi-6 ezisa impumelelo kuyo yonke imisebenzi yakhe.
Ngoku i-Terra Incognita iya kukunika ithuba lokumisela i-amulet yeMali yakho, i-amulet yeshishini okanye indibaniselwano yomibini kunye nemimoya oyithandayo. Makudweliswe oomoya kunye namandla abo:
The imali Imimoya:
Bayeli: UKumkani uBhali okanye ngamanye amaxesha obizwa ngokuba nguBhelezebhule yingcali yobutyebi obufunyenwe ngobuchule
Seere: Le yi daemon enobubele kakhulu efuna ukukholisa. Uya kuzisa ubuninzi obuninzi ngequbuliso
Mammon: Lo ngumoya kuphela ongabonakaliyo kwi-Ars Goetia. Amandla akhe kukunceda Umlumbi uzuza ubutyebi obukhulu, intabalala nobutyebi. UMammon ungqongqo kwaye unzima. Ukuba ucela ubutyebi bezinto eziphathekayo kunye nobutyebi kuya kufuneka wenze iminikelo etyebileyo. Owona mnikelo ulungileyo wale daemon yiGolide. Iingqekembe zegolide, iipendenti, izacholo zomqala, njalo njalo. Uya kuwandisa umnikelo ngamnye ngekhulu kulowo umhloniphayo.
Astaroth: I-Astaroth inobubele kakhulu kubalandeli bayo kwaye ibavuza ngemali kunye namatye anqabileyo
Asmodeus: Uyinkosi yezolonwabo kunye nabangcakazayo. Ukuba ufuna imali ngokungcakaza, uAsmodeus lolona khetho lwakho lubalaseleyo.
Shax: Isiphiwo. Unokukunika izipho ezibonakala ngathi azikho ngqi. Lumkela iminikelo. Ukuba awumniki umnikelo ofanelekileyo, uya kuthatha izinto kuwe
Decarabia: Lo moya yingcali ekususeni imiqobo okanye iimeko zikubambe umva
Forneus: Unceda ngemicimbi yezomthetho kwaye wenza ukuba abanye bakhole kuwe abanokulunge kakhulu kwimicimbi yeshishini
Haures: Lo ngumoya owufunayo ngokwamaqalo amatsha kunye neeprojekthi ezintsha.
PaimonUkumkani we-daemon oguquguqukayo. Sebenzisa kakhulu ukuqonda komlingo, usukelo lokuyila, ukucwangcisa, ukubopha abanye kwinjongo yakho. Inomdla kakhulu kwishishini
Zagan: Uguqula izinto. Ngaba unako tshintsha izinto ezintle uzenze ezimbi ngokungafaniyo.
Belial: I-daemon efanelekileyo yeshishini ngendlela enomsindo. Uza kucoca indlela yakho ngokususa yonke inkcaso.
injongo: kufuneka ibekhona kuwo onke amaShishini kunye neMali. Amandla asisiseko kodwa anamandla amakhulu. Le ikhona kuzo zonke iimali zethu zeshishini. Injongo yomoya wokuyila nokudala, ususa iibhloko, inkuthazo, ukubhala, ukutyhila ubuhlakani bangaphakathi, charisma, charm, grace, helping one to charm those in a social setting. Ukhetha eminye imimoya emi-3.
Ibinzana eliphezulu le-latin lithi: I-fortuna ye -hlathi adiuvat, eguqulweyo: I-Fortune ithanda inkalipho
Unokukhetha kwakhona eli binzana: I-Faber est suae quisque fortunae, eguqulelweyo: Indoda nganye ayenzi ngobutyebi bakhe.
Amulet anikwe amandla yi 7 Imimoya yeeOlimpiki kunye nokutywina okukhethekileyo kwamatywina okwenza le nto ikhetheke kwaye inamandla amakhulu.
Ifumaneka ngentsimbi ye-35mm okanye kwiSterling isilivere 40mm
Ezinye zeembono ngee-amulets:
I-Lottery, imidlalo kunye nokuphuma kwemali:
I-Seere, i-Asmodeus - uShax
I-Astaroth -Asmodeus - Shax
Ukuqala iShishini elitsha:
I-Decarabia - i-Haures - uPaimon
Ukuxhobisa ishishini elikhoyo:
I-Decarabia - Paimon -Belial
Ukulungiswa kweshishini elinomzabalazo:
UZagan - uBelial -Decarabia